Ingabe inja yokuxuba iMalamute Pitbull iyindawo yamandla oyidingayo? - Izinhlobo
Ingabe inja yokuxuba iMalamute Pitbull iyindawo yamandla oyidingayo?
Obeye aziwe njengo I-Alaskan Pitbull futhi UMally Pit , ukuxubana kweMalamute Pitbull kuyinto enqamulelayo enamandla, namandla, nokwethembeka kwabazali bayo abamsulwa.
Bangakhuliselwa ezemidlalo nobungane, kepha le nja yomklami akuyona eyabo bonke abantu.
Ngobuntu babo obunesibindi, thola konke odinga ukukwazi mayelana nokuxubeka kwe-Alaskan Malamute Pitbull bese uthola ukuthi kufanele yini ukuthole.
Uyini ngempela umxube weMalamute Pitbull?
Ngabe i-Alaskan Pitbull ibukeka kanjani?
Ubushushu: Ngabe izinja ezixubene nePitbull Malamute zinolaka?
Ukunakekela inja yakho yePitbull-Malamute
Ngabe i-Alaskan Malamute Pit ixubeke kahle?
Ukuthola imidlwane yokuxuba i-Alaskan Malamute Pitbull iyathengiswa
Ingabe kufanele uthole ukuhlanganiswa kweMamalute Pitbull?
Konke kusegameni - isiphambano phakathi kwe-Alaskan Malamute ne-Pitbull. Futhi njengezinhlobo eziningi ezixubekile, alukho ulwazi oluningi mayelana nokuthi lwaqala nini.
Abanye bathi umlando wabo uqale ngasekupheleni kweminyaka yama-1800 noma ekuqaleni kwawo-1900.
Singahle singalutholi ulwazi oluvela kumaqembu aphezulu ekennel noma izinhlangano ze-canine ngalolu hlobo, kepha singathola ukuthi iMally Pit izophuma kanjani ngokubukeka nangokomzwelo ngokwazi abazali bayo.
Hlangana ne-Alaskan Malamute
Hlangana ne-Alaskan Malamute enkulu nebukekayo
Ukuthola igama layo esizweni saseMahluemuts Innuit esasihlala ogwini olusenyakatho-ntshonalanga ye-Alaska, i I-Alaskan Malamute ibikhona iminyaka engaphezu kwengu-4,000.
Abantu babo babethembele kubo njengoba indlela yezokuthutha kanye nezihlibhi zikagesi , ngenkathi futhi sisiza ekuzingeleni izimvu zamanzi namabhere.
Babe sebesiza abacebisi eWest Coast ngesikhathi seGold Rush, kodwa futhi yisikhathi esifanayo lapho lolu hlobo lwahlanjululwa khona.
Abafuyi baqala ukuwaxuba nama-canine amancane ukuze asetshenziselwe ukugijima.
Ngawo-1920, izinhlobo ezihlanzekile zavuselelwa ngempumelelo, kwathi iMalamutes yagcina yaziwa yi-American Kennel Club (AKC) ngo-1935.
Hlangana ne-American Pit Bull Terrier
I-American Pit Bull Terrier - iziqhwaga ezinkulu zomlomo
Kubizwe ngokujabulisayo Pittie , lokhu kuhlanzekile yasungulwa esifundeni saseNgilandi saseStaffordshire yokulwa izinja ngawo-1800.
Ekuqaleni kwakubizwa nge- 'Bull and Terrier,' baziwa njengokuxubana phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene ze-Terrier ne- I-Old English Bulldog .
Lapho ukulwa kwenja sekuvinjelwe, uPitbulls waduma kancane.
Kepha ezinye zazo zathola indlela eya e-US ngekhulu le-19, lapho abafuyi babenza baba yi-canine enekhanda elikhudlwana kanye ne-heft ethe xaxa. Manje seziyaziwa ngePit Bull Terriers.
I-AKC yababona ngo-1936, kwathi ngemuva kweminyaka engama-30 noma ngaphezulu, baqanjwa kabusha ngokusemthethweni I-American Staffordshire Terrier .
Njenganoma yikuphi ukuphambana, inhlanganisela yeMalamute Pitbull ingathatha ngemuva kwezimfanelo zabazali bayo bangempela. Ngokuvamile banakho enamandla, imizimba enciphile .
Yonke leyo misipha iyabonakala kuzo zonke izifuba zazo ezijulile, imilenze eqinile, kuze kufike emsileni wobude obuphakathi nendawo.
Amehlo abo angaba luhlaza okwesibhakabhaka, nsundu, noma i-hazel, kuyilapho isifonyo sabo esiyisikwele singaba nekhala kuphela elimnyama noma elinsundu.
Uma iMally Pit ithatha ngemuva kweMalamute, lapho-ke iyoba nezindlebe eziqondile. Labo abafana kakhulu ne-Pitbull banezindlebe ezincane, ezilengayo.
Usayizi: Ngabe inhlanganisela yePitbull Malamute iba nkulu kangakanani?
Umxube we-Alaskan Malamute Pitbull uyi inja emaphakathi nkulu ngokuphakama kwe- Amasentimitha angu-16 kuya kwangu-26 (Amasentimitha angama-41 kuye kwangama-66) futhi unesisindo Amakhilogremu angama-60 kuye kwangama-80 (27 kuya ku-36 kg).
Imidlwane ye-Mally Pit ibhekwa njengabantu abakhule ngokugcwele lapho inezinyanga eziyi-18 ngaphambi kokufinyelela kulezi zilinganiso, kanti abesifazane ngokuvamile bancane kunabesilisa.
Ngokucabanga ngosayizi wabo namandla, lolu hlobo oluxubekile bazokwenza kahle kakhulu ezindaweni zasemakhaya noma emakhaya lapho bengafinyelela khona emagcekeni amakhulu noma endaweni engaphandle .
Ijazi nombala we-fido kungalindeleka, futhi!
Isiphambano seMalamute nePitbull sinamajazi amafushane, aminyene athambile ekuthinteni, kepha eza ngemibala ehlukahlukene.
Ungabathola ngombala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, omhlophe, owesiliva no-fawn. Bangaba nephethini le-brindle, sable, ne-agouti.
Abanye bangaba nemaski, amabala, amaphuzu, noma okunye ukumaka.
Lo mbuzo singawuphendula ngo-cha oqondile. Empeleni, ayikho inja enobudlova ngokwemvelo , ngaphandle kwalapho behlukunyezwa noma bephathwa kabi, okwenza bahlale besaba noma bekulungele ukulwa.
Izingxube ze-Alaskan Malamute-Pitbull izilwane ezifuywayo zomndeni ezinikelwe ngokumangazayo .
Bayakuthanda ukuba nenkampani yabantu babo kanye nezingane zakubo ezinoboya. Ungalindela nokuthi bazwane nezingane nezinye izinja noma izilwane ezifuywayo, inqobo nje uma zingahlangana nabantu futhi zaqeqeshwa kusenesikhathi.
Sekukonke, baba nezibopho eziqinile nawo wonke umuntu osemakhaya abo. Bathanda izingalo ukuthi bazonikeza uthando noma nini lapho bengakwazi.
Kungcono ukuthi uqaphele lapho le pooch iseduze nabancane nabantu abadala ngoba kungenzeka bangabazi ubukhulu babo ngesikhathi sokudlala.
Le vidiyo izokukhombisa ukuthi inhlanganisela ye-Malamute Pitbull ayinayo i-hyperactive, kodwa mikhulu impela njengamadlwane:
Siphinde sibancome kulabo abanolwazi lokuba namakhini abanesibindi nesibindi.
Uma ungumnikazi wokuqala futhi unquma ukuthola le fido, ngokuqinisekile izozama ukuqhuba umbukiso. Babuye bathande ukuzimela, ngakho-ke kufanele wazi lapho iMally Pit ifuna isikhathi nendawo kuphela.
Izingxube zeMalamute Pitbull zisebenza kakhulu, njengabazali bazo abanamandla. Njengoba baziwa ngobungqabavu nokukhuthazela kwabo, okungenani ihora lokuzivocavoca usuku luzokwanela le doggo.
Ungacabanga ngezinye izindlela zokugcina isiphambano sakho sePitbull ne-Alaskan Malamute simile. Ngaphandle kokuhamba, mthathe uye epaki yezinja noma umfundise amaqhinga amasha.
Ungahlela futhi umdlalo lapho wonke umndeni ubandakanyekile. Ungakhohlwa ukwengeza kwamanye amathoyizi, njenge emaphazili , yokuvuselela ingqondo.
Vele uqiniseke ukuthi awushisi kakhulu noma ubanda kakhulu lapho uzijabulisa ngaphandle.
Lolu hlobo ingachuma cishe kuzo zonke izinhlobo zezulu , kodwa akusho ukuthi ngeke ashise kakhulu ngenkathi edlala ngaphansi kwelanga noma ezwe ukubanda kakhulu egijima eqhweni.
Kuthiwani ngokudla kwenja yakho? Umxube weMalamute-Pitbull kufanele wondliwe Izinkomishi ezi-2,5 kuya kwezingu-3 zama-kibbles ezomile ezisezingeni eliphakeme nsuku zonke . I-canine esebenzayo njengale izodinga ukudla lokho kugcwele amaprotheni ukubenza baqhubeke.
Uma ukhetha ukondla i-fido yakho ngokuya ngemfuneko yakhe yansuku zonke yekhalori, ungakusebenzisa lokhu ikhalori wokubala ukubala ukuthi udinga malini kususelwa kusisindo.
Kepha uhlobo lokudla kwenja owondla nomngani wakho woboya kufanele futhi lususelwe kusayizi wakhe, imetabolism, nakwezempilo.
Ungayilungisa kanjani inhlanganisela kaMalamute Pitbull
Banjalo hhayi i-hypoallergenic izinja, kodwa ngenxa yejazi lazo elifushane ngokuqhathaniswa, ukuzilungisa bekungeke kube umsebenzi impela. Kulula ukugcina uboya obukhipha ngokulingene.
Lawula ukuchitheka ngokuxubha masonto onke usebenzisa i- ibhulashi le-slicker .
Amabhati kufanele enziwe kanye ngenyanga ukuvimbela amafutha emvelo engutsheni yesilwane sakho ukuthi omiswe. Kepha uma benuka kabi noma bengcolile ngokudlala ngaphandle, kusho ukuthi badinga ukuwashwa.
Khetha i- imoto enuka futhi enza okuhle ngoboya bakho beMally Pit.
Eminye imizila yokuzilungisa okufanele i-Alaskan Pitbull yakho ijwayele ukuyihlanza izindlebe masonto onke, ukuxubha amazinyo nsuku zonke, nokusikwa kwezipikili nyangazonke.
Iziphambano zeMalamute nePitbull Terrier ziqinile kakhulu, zine- isikhathi esifinyelela eminyakeni eyi-15 . Kepha basengazizuza njengefa izinkinga zempilo abazali babo abangathinteka kuzo.
Ezinye izifo ezinzima okufanele uziqaphele zinjalo I-Chondrodysplasia (Chd) kanye ne-canine hip dysplasia. Kukhona ne-cataract, i-glaucoma, isifo sikashukela, nezinkinga zesikhumba.
Lokhu akusho ukuthi i-Alaskan Pitbull yakho izothola zonke lezi zifo, kodwa kungcono ukwazi futhi thatha izinyathelo zokuphepha ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi isilwane sakho siphilile .
Uma usuvele unalo lolu hlobo oluxubekile noma usahlela ukuthenga, kunezivivinyo ngezikhathi ezithile ezinconyelwe bona ukuthi bazithole. Ezinye zazo zibandakanya ukuhlolwa kwe-ocular, ukuhlolwa kwamathambo, ukuhlolwa kwesikhumba, ama-X-ray, kanye nokuhlolwa kwe-CT.
Ngenkathi umdlwane wase-Alaskan Pitbull ungaba nzima ukuwuthola, lokhu kuqhekeka kuyindlela eshibhile kunezinja eziningi zomklami. Umdlwane ngamunye kungenzeka ibize phakathi kuka- $ 100 kuya ku- $ 600 .
Kuzwakala kukuhle, akunjalo? Kepha khumbula ukuthi lokhu kumane nje kuyibanga lentengo elijwayelekile.
Inani elinikezwa ngumfuyi lizoncika egazini lomzali, indawo yomthengisi, ukuthandwa kwekennel, kanye nokutholakala kwemidlwane.
Uma uzizwa sengathi ukulungele ukuqala usesho lwakho lenhlanganisela yakho ye-Alaskan Malamute & Pitbull Terrier, sinamawebhusayithi ambalwa ongawabheka.
Malamute Pitbull mix abalimi & ukutakula
Asikwazanga ukuthola ikennel noma umfuyi onguchwepheshe wale hybrid, kodwa ukubheja kwakho okuhle kakhulu kuzoba izinhlangano zokutakula zezinhlobo zabazali bazo.
Izikhungo zokutholwa noma izindawo zokukhosela zinakekela izindawo ezihlanzekile nezizalanayo. Bheka lezi zingxube zeMalamute nePitbull ezitholakalayo ezilungele ukwamukelwa:
Ukutakula kwe-Moonsong Malamute (IBoise, i-ID)
IBobbie's Pit Bull Rescue & Sanctuary (ISpotsylvania, VA)
Hlakulela Ukusindiswa Komgodi (IGermantown, OH)
Imigodi yase-Alaska ikhona ukuvikela namandla ama-doggos akhona izilwane ezifuywayo ezinhle kakhulu zemindeni esebenzayo . Bangadinga uthando oluningi nokunakwa, kepha ngokubuyisela, bazonikeza abantu babo induduzo nokuvikeleka.
IMally Pits izongena kunoma imuphi umndeni kalula. Noma kunjalo, qhubeka ngokuqapha njengoba kwenza lolu hlobo oluvelele udinga umnikazi oqinile ongakwazi ukulawula .
Ngabe ucabanga ukuthi uthole ukuthi yini edingekayo ukuze ube nomxube osabisayo nofana nothando kaMalamute Pitbull? Sazise ngokushiya amazwana ngezansi.
Imininingwane Yezinja Zokuzala Izinja zePapillon
kungani inja yami yomile ifuduka
Umxube wokuhlanganiswa komalusi waseJalimane
Intengo yomalusi omncane wase-Australia
ukhilimu we-english usayizi we-retriever we-english
yini i-labrador retriever yesiliva